Antsafa niarahana tamin’i José Chuvé Mengarí, mpikatroka nomerika amin’ny fiteny Bésiro · Global Voices teny Malagasy
Mpampiatrano ny kaonty Twitter @ActLenguas 6-12 Avrily 2020.
Voadika ny 09 Mey 2020 14:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Esperanto , Ελληνικά, Español
Saripika nozarain'i José Chuvé Mengarí.
Ao anatin'izao taona 2020 izao izahay manohy amin'ny fanentanana amin'ny media sosialy amin'ny fanasana mpampiatrano isan-karazany hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fahavitrihana ara-piteny) sy hizara ny zava-niainan-dry zareo amin'ny famelomana aina indray sy amin'ny fanandratana ny fiarovana ireo fitenin-janatany. Ny lahatsoratra etoana dia iresahana ny momba an'i José Chuvé Mengarí na José “Tigre” (@JoseChuvem) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiatrano azy.
Ao anatin'ny firenena vazimba Monkox-Chiquitano aho. Teraka sy niaina tao amin'ny Tanin'ny Vondrom-Piarahamonina Teratany (TCO raha amin'ny fanafohezana amin'ny teny espaniola) ao Lomerío aho mandra-pahatonga ny faha-22 ny taonako, raha nanapa-kevitra ny hifindra any an-tanànan'i Santa Cruz de la Sierra, izay onenako amin'izao fotoana izao, hianatra Sosiolojia ao amin'ny Oniversite Mizakatena Gabriel René Moreno. Manampahaizana manokana momba ny indizeny ao amin'ny Governemanta Monisipaly Mizakatenan'i Santa Cruz de la Sierra ao Bolivia aho. Community manager amin'ireo pejin-tranonkala maro manana lohahevitra indizeny an-tanandehibe ihany koa aho, ary mpandrindra sy mpamokatra ny fandaharana onjampeo ‘Feon'ny Vazimba an-Tanandehibe’ (Voces Indígenas Urbanas, VIU). Mpiantsehatra voalohan-daharana ihany koa aho amin'ny sarimihetsika “Santa Clara“. Efa niasa tamin'ireo famokarana dokambarotra ho an'ireo orinasa isankarazany ao amin'ny firenena ihany koa aho.
Tsy miely antserasera loatra ny fiteny Bésiro (na Chiquitano). Tsy miasa amin'izao fotoana izao ireo fanorenana asa hafa efa navoaka. Ao amin'ny Tanin'ny Vondrom-Piarahamonina Teratany an'i Lomerío, eo am-pamelarana azy ny Nidos Linguisticos (Language Nests na Akanin'ny Fiteny), amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL, Sendikàn'ny Vondrom-piarahamonina Vazimba ao Lomerío) —Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC, Ivontoeram-pirenenamaro Fianarana ny Fiteny sy Kolontsaina maro) ary ny FTMF-ONG CEJIS. Ao amin'io faritra io, tokotokony ho efapolo isanjaton'ny olona no mampiasa ilay fiteny, fa ireo olondehibe ihany no miteny azy.
Hifantoka amin'ny famokarana haino amanjery aho, izay iasanay indrindra ao amin'ny VIU amin'izao fotoana izao, eo amin'ny fiheverana fa ny tanora no mirotsaka ao amin'ny tambajotra sosialy. Ary, mazava loatra, fa hifantoka ihany koa amin'ny zon'ny vazimba ao an-tanàna ihany koa aho.
RV: Inona avy ireo hery mpanetsika anao havitrika ara-nomerika ho amin'ny fiteninareo? Inona avy ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Kinendriko ny hianatra indray ny fitenin'ny reniko, ary amin'izay fotoana izay aho hanamafy ny mari-panondroako ara-kolontsaina ao an-tanàna. Maro ny fahendrena sy fahalalàna miadina ao amin'ny fiteninay, izay tsy maintsy atao fantatry ny vahoaka tsy-vazimba, mba hanamafisana ny fifandraisana fiaraha-miaina milamina ao an-tanàna. manonofy aho ny hamoaka votoatin-kaino aman-jery amin'ny sehatra maro, saingy raha azo atao mamoaka hira Monkox amin'ny Spotify, mba ho mora tazan'ny tanora izany.